MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2012
at 12/31/2012 09:12:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ဆင်ဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာ သစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ စက်ကြီးတွေနဲ့ ရောက်ရှိနေတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဆင်ဘိုမြို့ခံတစ်ယောက်က RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
at 12/31/2012 09:10:00 PM No comments:
at 12/31/2012 09:02:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပက်သက်၍ ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် စစ်ဦးစီးချုပ်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိနေကြောင်းကို ကိုမြအေးက ပြောကြားသွားခဲ့သည် ။
“ကျွန်တော် ထောင်ကလွှတ်လာပြီးကတည်းက ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်း ရေး အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ ၊လက်ရှိ အခြေ အနေမှာ ဘာမှအရာမထင်သေးတဲ့အပြင် ပိုပြီးဆိုးရွာလာတာတွေ တွေ့ လာ ရတဲ့အခါမှာ လက်ရှိအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်စရာ အများကြီး ရှိလာပါ တယ် ၊ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နေသလားလို့ သံသယဖြစ်စရာတွေ ကျွန်တော်တို့ တွေ့လာရပါတယ် ၊ နောက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကို တိတိလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ် ၊ ဒီလိုစစ်တွေဖြစ်ပြီး ဖိအားပေးပြီးလုပ်နေတဲ့စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအာရပ် အစ္စရေးကို ပြန်ကြည့်ပါ ။အခုထိမပြီးဆုံးသေးပါဘူး ။ ဒီလိုအချင်းချင်း စခန်းတစ်ခုကို သိမ်းပြီးတော့မှအကယ်ဒမီဆုတွေယူဖို့ ပြိုင်နေမှာလား ဆိုတာကို ကျွန်တော် မေးချင်ပါတယ် ” ၄င်းကပြောကြားခဲ့သည် ။
at 12/31/2012 09:00:00 PM No comments:
ဗမာအစိုးရ၏ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကြီးတွင် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အပေါ် ပြည်သူတွေယုံကြည့်မှု ကင်းမဲ့အောင် ၀ါဒဖြန့် လျက်ရှိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တော်တော်ပင် များလာပြီဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကေအိုင်အို အစိုးရအပေါ် အများပြည်သူလူထု ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကာ မကောင်းမြင် လာစေရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် ဗမာအစိုးရပိုင် သတင်းစာကြီးတွင် ၀ါဒဖြန့်လျက်ရှိသည်။ ကေအိုင်အိုအစိုးရပိုင် မလိရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်သို့ (၂၄) နာရီ မီးပေးလျက်ရှိသော မီးကြိုးများကို ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ စစ်လေယာဉ် များဖြင့် ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး ကေအိုင်အို အစိုးရကို လက်ညိုးထိုး အပြစ်တင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကေအိုင်အိုအစိုးရပိုင် ရေအား လျှပ်စစ်ကို အသုံးပြုပြီး ကေအိုင်အို အစိုးရအပေါ် အပြစ် တင် ဝေဖန်အပုပ်ချခြင်းသည် ဗမာအစိုးရ၏ အရှက်မရှိ၊ အစိုးရမဆန်ပဲ အာဏာရူး ရူးနေသည်ကို ပေါ်တင် ပြသခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက် ရပါသည်။
at 12/31/2012 08:30:00 PM No comments:
at 12/31/2012 08:29:00 PM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ တွင် မြန်မာ့လေတပ်က ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ လေယာဉ်မှနေ၍ အပြာရောင်ပလပ်စတစ် ဆင်ရုပ်ကို ကျဲချခဲ့သည်။ ယင်းဆင်ရုပ်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ၀ိုင်းမော် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတလျှောက်၊ လိုင်ဇာမြို့ အထက် ကောင်းကင်တွင် ပျံဝဲနေသည် တွေ့ရှိခဲ့ကြရသည်။ အချို့အရုပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့လည်း ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ နေ့လည်(၁၂)နာရီအချိန်တွင် Bomber လေယာဉ်တစ်စီး ပျံသန်းသွားပြီး နောက် ဆင်ရုပ်ကို လေထဲပျံဝဲနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
at 12/31/2012 08:28:00 PM 1 comment:
at 12/31/2012 08:28:00 PM No comments:
at 12/31/2012 08:27:00 PM No comments:
အစိုးရ၏ လဂျားယန် ပွိုင့်တခုကို KIA ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မဟာမိတ် ပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့တို့သည်၊ ကြည်းကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် အမြောက်ကြီးများ၏ တလစပ် ပစ်ခတ် မှုဖြင့် အကာအကွယ် ရနေသော လဂျားယန်ရှိ အစိုးရ တပ်များ သိမ်းပိုက် ထားသော တောင်ကုန်း တခုကို ယနေ့ (၂း၁၅) နာရီ တွင် ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်ဟု ABSDF မြောက်ပိုင်း ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး မင်းဌေးက ဆိုပါသည်။
at 12/31/2012 06:41:00 PM No comments:
at 12/31/2012 06:21:00 PM No comments:
လိုင်ဇာမြို့တော်ကို ရခိုင်တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုသွင်အောင် နှင့် အဖွဲ့ ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
သတင်းထောက်များကို ပြောရာမှာ "ကျနော်တို့က ရခိုင်တပ်တွေပါ" လို့ ပြောလာကြောင်း သိရသည်။
"ကနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ဘုံရန်သူရှိနေပါတယ်... ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာ မိတ်တွေပါ" လို့ပြောပါတယ်။
at 12/31/2012 11:58:00 AM No comments:
ကချင်တွေ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု အကြောင်း စဉ်းစားလာတာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းကပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။
ဗမာ လူမျိုးများတောင် လက်မခံတဲ့ ဗမာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ အပိုင်စီးထားတဲ့ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားများကို မခံချင်အောင် အမျိုးမျိုး ရန်စပြီး လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံ၊ မဒိမ်းကျင့်၊ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၊ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး ဆက်ဆံနေခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းကပါ။
at 12/31/2012 11:52:00 AM No comments:
at 12/31/2012 11:44:00 AM No comments:
(Jinghpawkasa) (Dec 30, 2012)
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) ဌာနချုပ်ဖြစ်သော လိုင်ဇာမြို့ ကောင်း ကင်ယံပေါ်တွင် ဗမာအစိုးရ စစ်လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်ဖြူတော်ရုပ် တစ်ခုကို ယနေ့ ညနေပိုင်း (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် လာရောက် ချထားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ကေအိုင်အိုအစိုးရ နှင့် တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ အကျအရှုံးများပြာလာမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ယတြာချေ ခြင်းဖြစ်မည်ဟု လိုင်ဇာ ဒေသခံများက ထင်ကြေးပေးကာ ဝေဖန်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 12/31/2012 11:36:00 AM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက် ညနေ (၅)နာရီ (၁၅)မိနစ်အချိန်တွင် ဒေါ့ဖုန်းယန်မှ ၁၀၅ မမဖြင့် လိုင်ဇာမြို့ကို ချိန်ရွယ်ကာ (၅)ကြိမ် ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့သည်။ အမြောက်ဆံ(၂)ခုသည် လိုင်ဇာမြို့အနောက်ဖက်တောင်တန်းသို့ ကျရောက်ကာ ကျန်(၃)ခုသည် လိုင်ဇာမြို့တဖက်ကမ်း တရုတ်နိုင်ငံ နားဘန်း(Nabang)မြို့အစွန်တွင်တလုံး၊ ရင်ကျန်မြို့သို့သွားရာကားလမ်းနဘေး ကျွန်းစိုက်ခင်းတွင် (၂)ခု ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ကျရောက်ပေါက်ကွဲသော နေရာသို့ တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးမှုပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
at 12/31/2012 11:33:00 AM No comments:
ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက် မနက်(၉)နာရီမှ (၁၀း၃၀)အချိန်အထိ ပန်ဝါဒေသ၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင်(၅)တွင် တပ်မ(၈၈) လက်အောက်တပ်ဖွဲ့ ခမရ(၃၀၁) တပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ခလရ(၃၀၁) တွင် ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ သင်္ဃန်းဝတ်ဘုန်းကြီးတွင် မှန်ဘီလူးတလက်ပါရှိ ကာ KIA တပ်စခန်းသို့ မှန်ဘီလူးဖြင့် မကြာခဏကြည့်ကာ မြေကတုတ်ထဲသို့ ၀င်လိုက်ပြူကြည့်လိုက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့ မနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဘန်ညို(Bang Nyu) တောင်ကုန်းရှိ KIA
at 12/30/2012 02:40:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - မိုးညှင်း ရထားလမ်းပေါ် ရှိ တောင်နီကျေးရွာကို ဒီဇင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့ည တွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၅) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ သိမ်းပိုက် ထိမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဗမာအစိုးရသည် ကချင် လူမျိုးများအပေါ် အမျိုးတုံး စစ်ကို လက်တွေ့ဆင်နွဲနေပြီဖြစ်သော ကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ ကချင်လူမျိုးများ အားလုံး ဗမာနယ်ချဲ့ အစိုးရ ကို ရောက်ရာအရပ်မှ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန် ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက် အထူးသတိရှိကြရန် တာဝန်ရှိသူများမှ သတိပေး ပြောကြားလာကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 12/30/2012 02:27:00 PM 1 comment:
KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဌာနချုပ် လိုင်ဇာနဲ့ မလှမ်းမကမ်း လဂျားယန်မှာ မြန်မာအစိုးရ တပ်တွေနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တွေ အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပြီး၊ မြန်မာစစ်တပ် ဘက်က လေ ကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ KIA တပ်တွေကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဆုတ်ခွာဖို့ မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က KIA ကို ရာဇသံပေးပြီး တဲ့နောက် အခုလို မြန်မာစစ်တပ် ဘက်က လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်မှု တွေပါ လုပ်လာတာပါ။ အခြေအနေ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကချင်လွတ် မြောက်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးလာနန်ကို ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
“အခု ဒီမှာ စကားပြောနေတုန်းပဲ၊ လဂျားယန်မှာ ဂျက်ဖိုက်တာ နှစ်စင်းနဲ့ ပစ်နေတာ။ အခု ၅ နာရီ ၂၀ လောက်မှာ စပြီးပစ်တယ်။ အခုလည်း ပစ်နေ တုန်းပဲခင်ဗျ။ ဒီနေ့ လဂျားယန်မှာ သုံးကြိမ်မြောက်ပေါ့။ ဒီနေ့ ၁၂ နာရီခွဲမှာ တကြိမ် တစင်း လာပစ်တယ်။ ခဏ ၃ နာရီခွဲမှာ တကြိမ် လာပစ်တယ်၊ အခု ၅ နာရီ ၂၀ မှာ နောက်တကြိမ် လာပစ်တယ်ခင်ဗျ။ ခုထိ ပစ်တုန်းပါ။”
at 12/30/2012 02:18:00 PM No comments:
at 12/30/2012 02:13:00 PM No comments:
at 12/30/2012 01:59:00 PM No comments:
at 12/30/2012 01:58:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Myitkyina - Manmaw lam ntsa na Na Lung, Hka Ya hte Bum Re mayan December (29) ya shani KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni laja lana gap gasat lai wa sai lam na chye lu ai. N dai zawn gap gasat ai hta myen hpyen maga na hk-l-y (53) na Dum Jum Kyaw Swar Aye hte hpyen du (2) si hkrum lai wa sai lam, hpyen hpyen la ni gaw (60) jan si hkrum lai wa sai lam shiga na chye lu ai.
at 12/30/2012 01:49:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dingdung Ginwang Dap Ba (1) up hkang ginra rai nga ai Myitkyina - Sumpra Bum - Putao lam gram shim lam ga baw hte lai wa sai November (5) ya kawn nna lung wa ai myen hpyen asuyaatatma (33) kata na Byuha (1), (2) n i gaw n gupaga hte gaw nanhte mung shawa masha ni hpe roi rip zingri ai lam, mya lu mya sha ai lam ni n galaw na re, mare kataatsawm rai nga mu nga tsun lai wa ai rai tim kaja wa ta tut hta gaw shai nga ai lam na chye lu ai. Myen asuya hpyen hpung ni gaw mung shawa masha niadusat yam nga ni hpe majoi gap sat sha ai lam, arung arai kaja ni hpe mya lu mya sha ya ai lam, num ma ni hpe roi rip nna, la ni hpe gaw majoi rim la nna adup zingri, san jep shagyeng ai lam ni hpe galaw nga ai lam buga masha ni kawn na chye lu ai. Myen hpyen ni n dai zawn zingri zingrat ai majaw mawdaw lam mayan mare kahtawng hkan na myu sha ni gaw nam maling de hprawng yen hkawm nga ai lam hte n kau gaw KIO Ba (1) up kang ginra shim lum ai shara ni de htawt sit shang wa ding yang rai nga ai lam hpe mung matut na chye lu ai.
at 12/30/2012 01:48:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်တက်နေတာဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ် ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပျက်စေတဲ့အတွက် စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲကြဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
at 12/30/2012 01:47:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dingdung Ginwang Dap Ba (1) up hkang ginra rai nga ai Sumpra Bum lam de Dap Dung (4) na Myu Tsaw Share Ninghkring ni hte myen hpyen asuyaatatmat (33) na hpyen hpung ni hte gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn gap gasat ai hta KIA myu tsaw share shagan (3) myu hte mungdanamatu asak ap nawng lai wa sai lam hpe mung na chye lu ai. Myen hpyen maga na gaw marai (9) si hkrum lai wa sai lam na chye lu ai. Matut nna Hka Garan Mare makau kaw mung KIA Dung (22) na myu tsaw share ninghkring ni hte (101) Zai Ladat hpyen hpung ni kawn myen hpyen niahpyen mawdaw (1) mi hpe dai ni kapawayai kau ya lai wa sai lam hpe na chye lu ai.
at 12/30/2012 01:45:00 PM No comments: